Lọ ahịa kacha mma na Fifth Avenue nke New York | Akụkọ Njem
Lọ ahịa kachasị mma na Fifth Avenue nke New York
New York Ọ bụ otu n'ime obodo kachasị mma n'ụwa maka nlegharị anya. Ọ na-enye ihe ngosi dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ahịa iji nwee obi uto na oria ojoo nke ndi ogbo a.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ịga ahịa, ịgagharị n'okporo ụzọ 5th Avenue bụ ihe dị mkpa. Okporo ụzọ ahụ bụ akụkọ ihe mere eme na n'ime obi Manhattan. Lọ ahịa kachasị mma dị n’etiti 39 na 60th, ọ bụ ezie na n'ezie ijegharị ya site na mmalite ruo na njedebe na-abụkarị aghụghọ ...
1 Onye ama ama nke 5th
3 Shopslọ ahịa akwa
Onye ama ama nke 5th
A makwaara ya dị ka "Okporo ámá kachasị ọnụ n'ụwa" na ọ bụ ezie na ọ bụ paradise ịzụ ahịa ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịdị oke ọnụ ma bụrụ naanị ha.
O sitere na patrician kemgbe tupu ya abụrụ n'okporo ámá azụmahịa ọ bụ ụzọ obibi nke ezinụlọ ndị kasị baa ọgaranya na New York zutere, laa azụ na XNUMXth na mmalite narị afọ nke XNUMX.
Ọtụtụ n'ime ụlọ ndị mara mma na nke akụkọ ihe mere eme na obodo. Mana oge a abụghị njem ndị njem kama ọ bụ ịzụ ahịa ka anyị hụ nke bụ ụlọ ahịa kachasị mma na 5th Avenue.
Ọ bụ isi ụlọ ahịa nke ika, na Storelọ Ahịa Apple Central. Ọ dị na nọmba 767 nke ụzọ na emeghe ụbọchị ọ bụla n'afọ. Ọ bụ ụlọ ahịa na-anaghị emechi emechi ma nwee atụmatụ dị egwu, igwe mbuli elu, steepụ ugogbe na nso ndị ọrụ 300.
Ọ bụ ụlọ ahịa na-ahụ ihe niile ika ngwaọrụ, software na nanị ọrụ. Na-enye ọrụ ikike, ị nwere ike imelite mkpanaka gị, nakọta ịzụrụ ihe ị mere n'ịntanetị na ndị ọzọ.
N'oge a ọ na-arụ ọrụ mmezigharị mana agbanyeghị, n'azụ ụzọ mbata, emechiri, ọ ka na-arụ ọrụ.
Shopslọ ahịa akwa
N'ezie ndị isi mkpọsa ụdị, fashionable na ọnụ ala uwe, bụ ebe a ka ị nwere H&M, Abercrombie Faịlụ, Gap na Zara, ọmụmaatụ. A kpochapụwo nke ị ga-achọ ileta, n'ihi na ọ na-apụtakarị na usoro telivishọn na ihe nkiri, bụ Saks, emi odude ke 611.
Banyere egwuregwu ị nwere ike ịga Adidas, ụlọ ahịa ọhụrụ, ụlọ ahịa nke ndị sneakers ejikere ịlọ ụwa Ọhụụ Ọhụrụ, niketown, Reebok ma obu The North Face maka ndị njem.
Masịrị ya ntecha na ngwaahịa mma? L'Occitane dị, otu MAC, Sephora na Redken.
Iji mee ihe ndị ọzọ ịzụrụ ị nwere ụlọ ahịa nke Hugo Boss, Salvatore Ferragamo, ndị ihe ịchọ mma van Kpochapụ & Ogwo, Prada ma ọ bụ Tiffany. Ma ọ bụrụ n’ịzụghị, ilele anya n’efu.
E nwere ụdị nke oge a, dị ka Uniqlo, kamakwa enweghi ụkọ ụdị kpochapụwo nwere ọnụnọ n'okporo ámá ruo ọtụtụ iri afọ, dị ka akara ngosi Mmasị, Unere Republic, DKNY ma ọ bụ Diesel.
Ọ bụrụ na ebe ị na-aga bụ naanị New York, ị nwere ike iji uru ma were njem nke Walt Disnin Store nke ị ga-ahụ ihe niile gbasara ụwa magburu onwe ya nke Disney ma ọ bụ, nhọrọ ọzọ, bụ Storelọ ahịa NBA, maka ndị na-agba bọl basketball, meghere n'oge na-adịbeghị anya.
Offọdụ n'ime ụlọ ahịa kachasị mma nke obodo dị n'okporo ụzọ a ma ama: Bergdorf Igbo ndi oma (754, n'etiti 57 na 58), Saks Nke ise Okporo ụzọ na Onyenwe anyị & Taylor (na nọmba 424). Onye mbụ n’ime ha bụ ọkachamara na mma nke ntutu na mbọ, ihe ịchọ mma, mana ama ama ama maka windo mara mma ọ na-eme maka oge ma ọ bụ ihe omume.
Lọ ahịa a ma ọ bụ ụlọ ahịa ngalaba a mepere na 1899 n'aka na onye mbịarambịa France mana ọ bụ nwata ọrụ ọrụ aha ya bụ Goodman tụgharịrị obere ụlọ ahịa ahụ ka ọ bụrụ ebe a na-egwu ọla edo.
Thekwaga n'okporo ụzọ nke 5 bụ na 1928 ma ọ bara uru ịga leta ọbụlagodi na ụlọ ahụ bụ ụlọ obibi nke ezinụlọ Vanderbilt bara ọgaranya.
Ije ije n'okporo ụzọ 5th nwere ike ijikọta ihe karịrị otu ọrụ n'ihi na ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ahịa karịrị akarị ị nwere ụdị echiche ndị ọzọ. O kwuru na mbido na ọtụtụ n’ime ụlọ akụkọ ihe mere eme si New York City bụ ebe a ya mere ọ bụ ezigbo ohere ịmara ha kwa.
N'ime ụlọ ndị a taa enwere ụfọdụ ụlọ ahịa kamakwa ụlọ ahịa, họtel, ụlọ nri, ebe ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ naanị ọfịs. E nwere ụlọ etiti nke ụlọ ahịa a ma ama Christie si, nke Buildinglọ Coca-Cola, nke Alaeze Ukwu State Building, na France ụlọ ọrụ nnọchiteanya, mega store nke Fujifilm ma ọ bụ Towerlọ Elu.
El Uglọ ihe ngosi nka Guggenheim, nke Ebe ndị Juu na-edebe ihe ochie, ndị na-esi ísì ụtọ Le Pain Quotidien ụlọ ahịa, na Obodo ngosi nka nka, nke Moma ma ọ bụ Museum nke Art Art, na Plaza Hotel, ndị Rockefeller dị n'etiti na mmegharị ya na ebe a na-edebe ihe nkiri, ndị Katidral St. Stephen, 5th Avenue Synagogue, ndi NY Ọbá akwụkwọ ọha nke ahụ na-egosi na fim Na-esote echi…
With na-eso ụmụaka aga? Childrenmụaka anaghị enwe mmasị n'ịga ije nke mere na ị ga-akwụghachi ha ụgwọ ma ebe magburu onwe ya iji wee zuru ike ma zuo ike na ihu igwe dị mma. Olọ ahịa egwuregwu ụmụaka FAO Schwarzer.
Ọ bụ ihe ụlọ egwuregwu ụmụaka na-egwuri egwu na-egosi na fim '80s nke Tom Hanks, Big ma ọ bụ ọ ga-amasị m ịbụ onye ukwu ka a maara ya na mba ndị na-asụ Spanish. Ọ nwere escalators, a nnukwu piano ebe ị pụrụ ịgba egwu, na o chepụta Barbie, hazie ụgbọ ala na-ekpo ọkụ wiil ma ọ bụ zụta swiiti. Harry Potter, Lego, Playmobile na ihe ọ bụla ị chọrọ.
Na ebe nrụọrụ weebụ ndị njem nlegharị anya na New York ị nwere ndepụta zuru ezu nke ụlọ ahịa na ọnọdụ ha na maapụ Google Maps. Ọ bara nnukwu uru ma na-enye gị ohere ịhazi njem ka ịghara ịhapụ ihe ọ bụla ma ọlị.
Mụọ amụ! Chekwaa ego, ndidi na ume n'ihi na ọ nweghị onye gbapụrụ na 5th Avenue.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » New York » Lọ ahịa kachasị mma na Fifth Avenue nke New York
Ihe ịma aka nke ịga Mecca